स्वार्थ समूह हावी हुँदा चेपुवामा माधव नेपाल ! - Kantipath.com
स्वार्थ समूह हावी हुँदा चेपुवामा माधव नेपाल !
पार्टी एकताको सुत्र खोज्न गएको सोमबारदेखि लगातार नेकपा एमालेको कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ। कार्यदलको बैठक आज विहान ९:२० देखि अर्थमन्त्रालयमा जारी छ। बैठकमा जानुअघि कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले पार्टी एकताको सुखद खबर आजै सुनाउने बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको एउटा–एउटा अडानका कारण कार्यदलले सहमतिको पूर्ण खाका अझै तयार पार्न सकेको छैन।
कार्यदलका सदस्यहरुले यी विषय मिलाउने विषय अब आफूहरुको ल्याकतभन्दा माथि पुगेको बताएका छन्। ‘तै पनि कुरा मिलिहाल्छ कि भनेर बसिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने। ओली निकट स्रोतका अनुसार पार्टी संरचनालाई जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्काउन उनी तयार भइसकेका छैनन। जेठ २ अघि लैजानु भनेको दुई कारणले ओलीका लागि घाटाको विषय हो। पहिलो, पार्टी संरचनालाई जेठ २ अघि फर्काउँदा अधिकांश तल्ला कमिटीमा नेपाल समूहकै वर्चश्व हुने डर ओली पक्षलाई छ।
‘०७५ जेठ २ अघिको संरचनामा फर्किनु भनेको पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ केन्द्रीय सदस्यसहितको कमिटी पुनर्जिवित गर्नु हो,त्यसमा ओलीजी सहमत हुनुभएको छैन, उहाँले पार्टी एकता हुँदा थपिएका ४५ जना र ०७७ फागुन २८ पछि थपिएका २३ जना समेत राखेर कमिटी ब्युँत्याउने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन, माधव कमरेड झन सहमत हुनुहुन्न,’ नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
माधव पक्षका तेश्रो पुस्ता भनेर चिनिएका जगन्नाथ खतिवडा, यज्ञराज सुनुवार, दिपक प्रकाश भट्ट, रामकुमारी झाँक्री, टंक कार्की लगायतका नेताहरु भने ओलीले संसद विघटन गलत हो भन्दै आत्मालोचना गर्नु पर्ने भन्ने पक्षमा छन् । पछिल्लो पटक कार्यदलले गरेको निर्णय नै अन्तिम नहुने भन्दै भेटघाटलाई तिब्रता दिएका छन् । एमालेको चौथो पुस्ता भनेर सुदेश पराजुली, वासिम आलम, आरति लामाहरुको समूहलाई चिन्ने गरिन्छ । उनीहरुले संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनको अग्र मोर्चामा छन् ।
लगभग विभाजन भएको एमालेको एकता कहिले र कसरी भन्ने बहस चलिरहेका बेला एमाले भित्रका गुट र उपगुटहरुको स्वार्थ सतहमा आउन थालेको छ । अध्यक्ष केपी ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षमा एकता नगरि नहुने र गर्न नहुने दुवै प्रकृतिको प्रबृति विद्यमान छ । प्रशंग हो माधवकुमार नेपाल पक्षमा चलिरहेको एकता गर्ने र नगर्नेबीचको संघर्षको । बाहिर एमालेका दुई पक्षबीच पानीबाराबारको अवस्था छ । अध्यक्ष केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा छन् । उनले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि उनकै पार्टीको अनेरास्ववीयु र युवासंघले सडक आन्दोलन गरीरहेको छ । प्रतिगमन २ भन्दै देशभरी युवा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन गरीरहेका छन् ।
कार्यदलमै रहेका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुषाल र रघु पन्त भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर मात्रै एकता संभव हुने पक्षमा छन् । कार्यदलमा नेपाल पक्षका दुई धार २ जेठमा गठन भएको एमाले विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा नै दुई धार देखिएका छन् । एक धार जसरी भएपनि ओलीसंग मिल्नु पर्ने अडानमा छ । जसको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डेले गरीरहेका छन् । उनलाई साथ गोकर्ण विष्टले दिएका छन् । यी दुई जना नेताहरू जसरी भएपनि एमालेसंग मिल्नु पर्ने भन्दै आएका छन् । उनीहरूको यो विचारको नेपाल पक्षमा विरोध हुदै आएको छ । केहि दिन पहिला भएको नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकाशंले तिब्र विरोध गरेका थिए । यी दुई नेता किन ओली प्रति यति नतमस्तक भए भनेर चर्चा हुने गरेको छ ।
युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले ओली पक्षसँग मिल्नु पर्छ भनेर ओकालत गर्ने पक्षलाई सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरेकी छत् । उनले भनिन्, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संबिधानलाई क्रियाशील गराउन संसदको पुनस्स्थापना एउटा अनिवार्य सर्त हो। हामीले यसको लागि एउटा प्रक्रियाको मात्र थालनी गरेका हौँ। अदालतको फैसलापछि सरकार बन्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने काम बाँकी छ। त्यसकारण कुनै पनि जालझेलमा पर्नुहुन्न।झुक्किनु हुदैन। कार्यदलमा अर्को पक्ष छ ओलीले सधै मनमर्जि गदै पार्टी संचालन गरेकाले उनलाई पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिलाएरमात्र एकता गर्ने अडानमा छ । जसको नेतृत्व कार्यदलका संयोजक भिम रावलले गरेका छन् । उनको साथ दिएका छन् घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्तले । २३ जना एमालेका सांसदले संसद विघटन विरूद्धको मुद्दामा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर पाण्डेले भने पछि वारेस राखेका थिए । उनी अहिलेपनि हस्ताक्षर फिर्ता लिएपनि हुन्छ भन्नेमा पुगेका एक केन्द्रीय सदस्य बताउछन् ।
यदि फागुन २३ यताका सबै निर्णय सबै खारेज गरेर निशर्त ०७५ जेठ अघिको अवस्थामा जाने हो भने कार्यदलमा सहमति हुन सक्ने ती नेताको भनाइ छ। यस्तै दुई समूहका बीचमा मिल्न नसकेको अर्को विषय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल पक्षका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षरको विषय हो।
नेपाल समूह सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रभावित पार्नेगरि हस्ताक्षर फिर्ता नलिने पक्षमा छ। ‘ओलीजीले गरेको प्रतिगमन, प्रतिगमन नै हो, हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय गर्ने हो भने उहाँले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो म फिर्ता लिन्छु भन्ने हुन्थ्यो नि त,’ स्रोतले भन्यो,‘त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने गरि अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा खोज्न सकिने बीचको बाटो हेरिरहेका छौं फेला परिसकेको छैन।’
यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। कार्यदलस्तरमा जारी पार्टी एकताको प्रयास सफल नहुँदै ओलीले आइतबार अपराह्न स्थायी कमिटी बैठक डाकेका हुन्। आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा (बादल)सहितका नेताहरु पनि सहभागी हुने जनाइएको छ।
एमाले एकता कार्यदलको बैठक अहिले सिंहदरबारमा जारी छ। कार्यदलले आज बिहानै सहमतिको सन्देश दिने बताए पनि अहिलेसम्म कार्यदल सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। कार्यदलका सदस्यहरुले आजै नेपाल पक्षसहितको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने जानकारी गराएका थिए। तर, ओलीले पूर्वमाओवादीका नेताहरुसहितको बैठक बोलाएपछि सहमतिको सम्भावना तत्काललाई टरेको आकलन गरिएको छ। बैठकमा स्थायी कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ । ‘हिजो नै कार्यदलमा सहमति बनेको कुरा आएको थियो । रातभरीमा के भएर रोकिएको हो थाहा भएन । महासचिवले अध्यक्षसँगको परामर्शमा स्थायी कमिटी बोलाउनुभएको हो’, तामाङले भने ।
Previous Previous post: भाेलीदेखि निगमका गाडी चल्न नदिने संयुक्त विद्यार्थी संगठनको निर्णय (विज्ञप्तीसहित)
Next Next post: बागलुङका ६६ घर पहिरोको उच्च जोखिममा